Kwenziwa yini ukuvakasha kweSingapore ukuvela ngemuva kwe-COVID-19?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Singapore Breaking News » Kwenziwa yini ukuvakasha kweSingapore ukuvela ngemuva kwe-COVID-19?
Izindaba Ezintsha • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Investments • Izindaba • Ukwakha kabusha • I-Singapore Breaking News • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Imboni yezokuvakasha yaseSingapore yenza ingxenye yayo ukulwa nemiphumela ye-COVID-19 esungula amamodeli wokusebenza amasha njengoba isekela imizamo yokulwa ne-coronavirus.
Ngenxa yemikhawulo yezokuvakasha yomhlaba engakaze ibonwe kanye nokuvalwa kwemingcele, iSingapore Tourism ibone ukwehla kokufika kwezivakashi kanye namarisidi ezokuvakasha ngo-2020. Izivakashi ezifika (VA) zehle ngamaphesenti angama-85.7 ngonyaka wezi-2020 ukufinyelela izivakashi eziyizigidi ezingama-2.7 (cishe zonke kusukela ezinyangeni ezimbili zokuqala zika 2). Amarisidi wezokuvakasha (TR) enqabile ngamaphesenti angama-2020 aya kuma-S $ 78.4 billion emakota amathathu okuqala ka-4.4.
Yize ibekezelele unyaka wayo onzima kunazo zonke emlandweni, umkhakha wezokuvakasha waseSingapore uthathe amagxathu okucabanga ngeminikelo yawo kanye nokuhlangenwe nakho, ngenkathi usekela imizamo kazwelonke yokubhekana ubhubhane lwe-COVID-19. Izinkampani ezihlobene nezokuvakasha ziye zahlomula ezinyathelweni ezahlukahlukene zikahulumeni zokuxhasa ukuguqula imikhiqizo yabo kanye nezinto abazinikelayo ngenkathi bezakhela amakhono amasha okuzibeka ethubeni lokukhula esikhathini esizayo.
Keith Tan, Umphatsi Lomkhulu we iBhodi Yezokuvakasha yase-Singapore (STB) uthe: “Umkhakha wezokuvakasha waseSingapore kuye kwadingeka ukuthi ulwele ukusinda ngo-2020. Amabhizinisi ethu ezokuvakasha akhombise ukuqina okukhulu nokuzivumelanisa nezimo kuso sonke lesi sikhathi esinzima, evuselela izindlela zebhizinisi labo kanye nobuchwepheshe bokusebenzisa izixazululo ezweni le-COVID-19. Ngiyabonga nangokuzibophezela kwabo ekugcineni abaseSingapore bephephile futhi bephilile.
“I-STB isazethemba isikhundla saseSingapore njengenye yezindawo zokungcebeleka nezindawo zebhizinisi eziphephe kunazo zonke nezikhanga kakhulu emhlabeni kanye nethemba lesikhathi eside lomkhakha wezokuvakasha waseSingapore. Yize ukuhambela kwabantu abaningi emazweni amaningi kungenzeki ukuthi kuqale kabusha ngendlela enkulu ngonyaka ka-2021, i-STB izoqhubeka nokuma ndawonye nabalingani bethu bemboni ukulungiselela ukululama nokuqala ukwakha ikusasa elingcono nelisimeme kwezokuvakasha. ”
Ngisho nangawo lo nyaka onzima, amabhizinisi ezokuvakasha adlala indima enkulu empini yaseSingapore ne-COVID-19. Amahhotela anikela ngezindawo zawo ngezinhloso ezahlukahlukene zokuhlala, kufaka phakathi Izinsiza Zikahulumeni Zokuhlukaniswa, Izakhiwo zeSwab Isolate. kanye Nezikhungo Ezizinikezele Zesaziso Sokuhlala Ekhaya (ama-SDF). Isibonelo, amahhotela angaphezu kwama-70 asebenze njengama-SDF ezindaweni ezihlukene kusukela ngoMashi 2020. Kusukela ngoDisemba 31, 2020, ama-SDF ahlalise abantu abangaphezu kwama-80,000 kwiSaziso sokuhlala ekhaya, ngokuxhaswa ngabasebenzi abangaphezulu kuka-2,300 embonini yamahhotela. .
Izindawo Zokungcebeleka Ezihlanganisiwe nazo zanikela ngezinye izindlela. Abasebenzi abangaphezu kuka-2,000 15,000 bamaResorts World Sentosa basebenze eCommunity Care Facility eSingapore EXPO naseMAX Atria, kanye nasenxanxatheleni yezitolo iBig Box. Babephatha imisebenzi, behlinzeka ngokudla, namakhithi okunakekelwa okupakishiwe. IMarina Bay Sands inikele ngokudla okulinganiselwa ku-15,000 kg kuThe Food Bank futhi yafaka amakiti angu-XNUMX okunakekela abasebenzi bokufika kanye nemindeni ethola imali encane ethintwe yilesi sifo.